हामीसँग महाभियोग लगाउने संख्या नभएर त चुप लागेर बसेका हौं : लक्ष्मणलाल कर्ण « News24 : Premium News Channel
हामीसँग महाभियोग लगाउने संख्या नभएर त चुप लागेर बसेका हौं : लक्ष्मणलाल कर्ण
काठमाडौं । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेता तथा संसदीय सुनुवाई समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले आफूहरुसँग प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्सेर जबराविरुद्ध महाभियोग लगाउने संख्या नै नभएकोले त्यतातिर केही नसोचेको बताएका छन् । उनले राज्यको तीनवटै निकाय कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका पंगु भएको टिप्पणी गरे ।
शुक्रबार काठमाडौंमा आयोजित एक साक्षात्कारमा उनले भने, ‘आज राज्य कहाँ छ भनेर खोज्नुपर्ने बेला आयो । अहिले जनता रोइरहेका छन् । देशभरि बेमौसमी वर्षाको वितण्डा भयो । किसान मारमा छन् । सरकारले राहत दिनुपर्ने बेला हो । क्षतिपूर्ति दिने त भनेको छ, तर कहाँ र कहिले दिन्छ ? कार्यपालिका पंगु बनेर बसेको छ । यो बन्न नै तीन महिना समय लाग्यो ।’
उनले राजनीतिमा अदालत प्रवेश गरेकाले अहिले अदालतमा पनि राजनीति प्रवेश गरेको गुनासो छ । उनले भने, ‘आज ६ लाख व्यक्ति नागरिकताविहीन छन् । म केपी ओलीलाई धन्यवाद छु । उहाँले हिजो नगारिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याउँदा कोर्टले रोक्यो । अदालतको अवस्था यही छ । सर्वोच्च अदालतको लिडर प्रधानन्यायाधीश हुन । सारा न्यायाधीश एकातिर अनि प्रधानन्यायाधीश अर्कोतिर । अहिले पनि २८ हजार मुद्दा फैसला हुन बाँकी छ ।’
उनले अहिले देखिएको अदालतभित्रको समस्याको समाधान कोर्टले नै गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उनले भने, ‘अहिले न्यायाधीशहरु भन्छन् छोड्नुपर्छ । वकिलहरु त्यही भन्छन् । एक जनाले छोड्दा सुधार आउँछ भने किन बसिरहने ? सुधार गर्नुपर्छ । जनताको बोली ठूलो कुरा हो ।’
त्यसो भए तपाईँहरु महाभियोग लगाउनुहुन्छ त ? कारण र आधार छन् ? भनेर पत्रकार धमलाले सोधेको प्रश्नमा उनले हाँस्दै भने, ‘महाभियोग लगाउने शक्ति नभएर त चुप लागेर बसेको हो नि । खोई त हामीसँग संख्या ? बेथिति कहिलेसम्म कायम राख्ने त ? जनताले कहिले न्याय पाउने त ?’